30 Daqiiqo Oo Faan & Been Ah
Monday March 25, 2019 - 16:16:52 in Articles by Hadhwanaag News
Ma hubo inaynu weli ku jirno Ololihii Doorashada ee Dadka Shacabka ah Xisbiga Kulmiye Beenta ugu Sheegayey si uu Codkooda u Xado.
Ma hubo inaynu weli ku jirno Ololihii Doorashada ee Dadka Shacabka ah Xisbiga Kulmiye Beenta ugu Sheegayey si uu Codkooda u Xado. Qudbada Madaxweynuhu Shalay ka hor Akhriyey Labada Gole run ahaan waxay ahayd Qudbadii ugu LIIDATAY, ugu FAANKA Badnayd, uguna HAB-MAAMUUSKA xumeyd ee Abid uu soo jeediyo Madaxweyne Somaliland ahi "Waxaan fili waa Socod-barade' aynu eegno kuwa Xigi doona ee Sanadaha Soo Socda".
1) Ugu horayn Madaweynuhu wuxuu Qudbada Sanadka ka jeediyey Labada gole Hortooda, Balse wuxuu Garbaha iska Dhigay Taliyayaashii Ciidamada Qaranka, halkii ay garba joogi lahaayeen Gudoomiyayaasha Labada Gole. Maan-garanin Qorsha iyo Habmaamuuska meesha ka Socday
a) Dalku Ma Dagaal buu ku jiraa??
b) Madaxweynuhu Ma Ciidamo ayuu u Qudbadaynayaa oo Dagaal-gelin buu ku jiray??? Indhaha Caalamku waa Yaabeen!!!
2) Madaxweynuhu wuxuu Qudbadaynayey 30-Daqiiqo; Qudbadiisa Bilow ilaa dhamaad Waxay ahay Faan iyo Buunbiinin Waxyaalo uu yidhi waanu qabtay, Balse aan la Arkin lana Taaban karin Badidooda "Bal Madaxweynuhu waxqabadka Wasiiradu u soo gudbiyeen dib ha ugu noqdo oo ha soo hubiyo".
3) Madaxweynuhu Wuxuu ka Gaabsaday inuu ka hadlo waxyaalihii ugu muhiimsanaa ee Shacabku ka sugayey ee kala ahaa:
a) Furfurka Bulshada ku dhacay ee Daweynta u Baahnaa
b) Cabashada Saami-qaybsi ee indhaha Bulshada & Caalamkuba arkayaan
c) Arimaha Cabashada Gobolada Bariga ee Furista Dastuurka
d) Qabsoomida Doorashooyinka Goloyaasha ee 2da Jeer la korshiyey Mudadii Sanadka ahayd ee Muuse Madaxweynaha ahaa
e) Jabhadaha Hubaysan ee Dalka ka Samaysmay
f) Sicir Bararka Baahsan ee Bulshada Aafeeyey
g) Cabashada Garsoorka ka dhex-jira ee Garsoore kastaa Go'aanka Jeebkiisa kala soo Baxayo
h) Cabudhinta Saxaafada loo diiday inay Madaxweynaha Waraystaan
i) Qorshaha cad ee Soomaalilaand ka leedahay Isbedelka Geeska ka Socda
j) Waxqabadkii DPW ee isu bedeley Dayactirka Dekedeenii hore iyo Weliba Jidadkeenii Hore.
Tiro laguma soo koobi karo Cabashada & Tabashada Qarankan ka dhex-jirta ee Madaxweyne Muuse Xalkooda iyo Qorshahooda laga sugayey balse uu Sacab & Mushxarad isku Dhaafiyey.
Waa Nasiib Xumo inuu Madaxweynuhu iska indho-tiray Waaqiciga dhabta ah ee Dalka yaal; una dhaqmay sidii Rajiimkii Mohamed Siyaad ee Sacabka iyo Jaanta qudha Maqli jirey, Soomaalidaa ku Maahmaahda "Hal Xaaraan ahi Nirig Xalaal ah ma Dhasho".